VaZuma Vosarudzwa Kuva Mutungamiri Mutsva weANC
Zvita 18, 2007
Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri weSouth Africa, Va Jacob GedleyihlekisaZuma, vasarudzwa neChipiri kuva mutungamiri webato riri kutonga re African National Congress, ANC. VaZuma vakunda mutungamiri weSouth Africa, uye vari mutungamiri weANC, VaThabo Mbeki nemavhoti anodarika mazana masere.
VaZuma vawana mavhoti 2 329, VaMbeki vakawana 1 505. Izvi zvava kureva kuti kana sarudzo dzekutsvaga mutungamiri weSouth Africa dzava kuitwa muna 2009, VaZuma ndivo vachange vachimirira bato reANC.
VaMotlanthe Kgalema, avo vanga vari munyori mukuru weANC, ndivo vasarudzwa kuva mutevedzeri waVaZuma, mushure mekukunda vaimbove mudzimai waVaZuma, Mai Nkosazana Dlamini-Zuma.
Chigaro chasachigaro webato iri, chaenda kuna VaBaleka Mbete, avo vawana mavhoti 2 326, vakakunda VaJoel Netshitenzhe, avo vawana mavhoti 1 475.
Chigaro chemunyori mukuru webato chaenda kuna Mai Gwede Mantashe, avo vawana mavhoti 2 326, mushure mekukunda VaMosiuoa Terror Lekota, avo vawana mavhoti 1 432.
Mai Thandi Modise ndivo vava mutevedzeri mutsva wemunyori mukuru webato iri, mushure mekukunda kwavaita Muzvare Angela Thoko Didiza, avo vanova gurukota muhurumende yaVaMbeki.
Mubati wehomwe mutsva ndiVa Matthew Phosa, avo vakunda mutevedzeri wemutungamiri weSouth Africa, Mai Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Sarudzo dzekutsvaga hutungamiri hweANC dzaburitsa pachena kuti chikwata chaVaZuma, ndicho chatonga musarudzo idzi. VaZuma, avo vakamiswa pamweri pedare gore rapera vachipomerwa mhosva yekubata chibharo munhukadzi anorarama nehutachiona hwe HIV, vanga vasisiri kuwirirana naVaMbeki.
Mazuva mashoma apfuura, VaZuma vakabuda pachena vachishora hutongi hwaVaMugabe, izvo zvisiri kuitwa naVaMbeki. Nyanzvi munyaya dzezve matongerwo enyika dzinoti zvinhu zvinogona kunakira Zimbabwe kana VaZuma vakatora chigaro chemutungamiri weSouth Africa muna 2009.
Professor John Makumbe vanoti VaZuma munhu anotaura chokwadi uye vane rutsigiro kubva kusangano revashandi vemu South Africa, re Cosatu. VaMakumbe vanoti vanoona VaZuma vachishandisa mukana wekuva mutungamiri we South Africa, mukugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe.
Professor Makumbe vaudza Ntungamili Nkomo weStudio7 muhurukuro yavaita kuverengwa kwemavhoti kusati kwapera kuti vanoona VaZuma vari munhu anokwanisa kugadzirisa gakava riripo panyaya yezvematongerwo enyika muZimbabwe kudarika zviri kuitwa naVaMbeki.